ပြင်သစ်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ… – PVTV Myanmar
ပြင်သစ်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ သတင်း
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ရှေ့နေကြီးများအသင်း(International Bar Association’s Human Right Institute) မှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ရုံးတင်မှုအတွက် စုံစမ်းမှုများပြုရန် ထိပ်သီးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်မယ် သတင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် “ထောင်ဝင်စာပို့ကြမယ်” အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ နွေဦးသူရဲကောင်းတွေကို ထောင်ဝင်စာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 13K Share – 1330
I’love PVTV and members.
2021-07-03 at 8:59 PM
မဂ္လာပါ pv tv ေရ
ခုဆို စကစ က မထူးဇာတ်ခင်း
တော်လှန်တဲ့ကလေးတွေများမယ့်မြို့တွေတော့ stay at home လုပ်
စားသောက်ဆိုင်တွေ စားသုံးသူဆီက ဆိုင်ရှင်ကတစ်ခါတည်း အခွန်ကောက်ဖို့
လမ်းသွားလမ်းလားတွေ လိုင်စင် အခွန်တွေကောက် ပေါ်တင်တောင်း စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့်
အမေစုက Covid ကာလ ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းချိန် ၂လစာ ထုတ်ချေးခဲ့တာတွေကို ဆပ်ရန်မလိုတော့ဟု ပြောတာတွေကို
ခုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မကင်းနိုင်တဲ့ CDM မလုပ်တဲ့ သူတွေဆီက ကြားသိရတာက အမေစုအစိုးရလုပ်ပေးခဲ့တာတွေက ဘာမှမဆိုင် ပြန်ဆပ်ရမှာဘဲ စသည်ဖြင့် ကြားသိနေရပါသည်
2021-07-03 at 10:48 PM
2021-07-03 at 10:55 PM
2021-07-03 at 11:20 PM
🥺🥺အကိုလျှံဖြိုးအောင်အတွက် Speak Outလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ 🙏
မျက်နှာသစ်တာက အစ အလေး/အပေါ့ အဆုံး
ဘေးကနေ ကူပေးမယ့်သူ လိုအပ်ပါတယ်။
မျက်ကြည်လွှာ အရေးပေါ် ကုသမှု လိုအပ်နေပါတယ်။
🚫 အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးလုနီးပါး
ဆက်လက် ဆေးကုသခွင့် မပေးဘဲ
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ 🚫
ညာဖက်မျက်ကြည်လွှာ ကုသခွင့် ပေးရန်
အနူးအညွတ် တောင်းဆိုပါတယ်ရှင့်။ 🙏
I would like you to ask you to speak out for
KO HLYAN PHYO AUNG. 🙏
📌Speak out together rather than share📌
He need to do exercise to be able to walk for leg injuries. He had lost one arm and he can’t do anything by himself. He needahelp to take care for him by someone just like familiar. And he needaurgent cataract treatment for his right eye. We strongly object to the imprisonment of KO HLYAN PHYO AUNG who is on the verge of vision lost without medical treatment.
KO HLYAN PHYO AUNG’s eye treatment. 🙏
No Credit required.Speak Out Please.
Creditတွေ ဘာတွေ မလိုပါဘူး။
အကို လျှံဖြိုးအောင်အတွက် Speak Outပေးပါ။
ဤpost အောက်တွင် တင်ပါရစေ😢🙏
မင်္ဂလာပါ။PVTV ။ သတင်းအမှန်တင်ပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2021-07-04 at 7:36 AM
2021-07-04 at 8:02 AM
International bar association အနေနဲ့ တည်ဆဲ တရားဝင် အစိုးရရဲ့ သမတနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ရှိသူကို ခြေဥပါ ဥပဒေကျင့်ထုံးကို မလိုက်နာဘဲ မဲမသမာမှုစွပ်စွဲချက်တခုတည်းနဲ့ အာဏာကို ဓားမြတိုက်ယူသွားတဲ့ ရာဇဝတ်သားတဖွဲ့ရဲ့
အောက်က အမှုစီရင်မှုတခုကို ရနိုင်သမျှသော စာရွက်စာတမ်းနဲ့ အမှုစီရင်ခြင်းက တရားမျှတမှုရှိ မရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးတါကတော့ အဲဒီအဖွဲ့က ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လောက်တော်တယ်၊ ဘယ်လို ထိပ်တန်းမှာ ရှိသလဲတော့ ကျနောအနေနဲ့ မသိလို့ ဘာမှ မပြောလို့ပေမဲ့ အခုလုပ်ပေါက်ကတော့ မြန်မာပြည်ရောက်လို့ ပေါကါးတွေကြည့်ရင်း ပေါတါတွေများ ဖြစ်သွားသလားလို့ ရှုစားရင်း ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို အားနာနာနဲ့ဘဲ ရေးသားလိုက်ရပါတယ်၊
ဥပဒေကျင့်ထုံးတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ လုပ်ငန်းစဥ်တွေကို ရလဒ်နည်းတူ တန်းတူညီမျှ အရေးပါတာကို မျက်ကွယ်မှုပြီး သေနတ်မိုးပြီး ရလဒ်ကသာ အဓိကဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကိုသာ ပကတိအမှန်တရားအနေနဲ့ လက်ခံခဲ့ရင် အမေရိကန်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကိုမဆို မြန်မာပြည်က ဖက်ဆစ်လူသတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို သေနတ်မိုးပြီး ရလဒ်ကအဓိကဝါဒကို ကျင့်သုံးရင် လက်ခံအသိအမှတ်ပြုဖို့လိုပြီး ပြည်တွင်းရေးပါလို့ မအော်ကြဖို့လည်းလိုအပ်သည့်အလျောက် လူမိုက်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကြောင့် အနည်းဆုံး ပေါတါကြီးလို အထင်ခံရတဲ့အပေါက်မျိုး မချိုးသင့်ကြောင်းကို စိတ်မသက်မသာနဲ့ ရေးသားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊
တရားဝင် စစ်ဆေး ခံရဲလား စစ်အာဏာရှင် ခွေးသားတွေ
Cuttie Angel says:
2021-07-04 at 4:29 PM
#မအလကြီး – အဘအကြောင်းသိချင်ရင် ….. အမှန်တရားသိဖို့ …..
အဘရဲ့ #တစ်ဖက်ပိတ်သမားတွေ ဝင်ဖတ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ….. 😅 ( #စည်းစိမ်တွေများ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူ/ စစ်သား/ ရဲ အပေါ်ကို #တော်တော်လေးကို_ကြည့်သားရှာထား ….. 🙄🙄🙄
#အမှန်တရားက သူတို့ ( စကစ_စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ ဆွေမျိုးတစ်သိုက် ) ရဲ့ #အိတ်ကပ်တွေထဲ ပြွတ်သိပ်ထည့်တာများ ပြောပါတယ် ….. ( ဒါတောင် #ကျန်သေးတယ် ….. 🥴🥴🥴 )
Mah Win says:
2021-07-04 at 7:21 PM
2021-07-05 at 8:49 AM
2021-08-26 at 2:32 PM